यस कारण गुम्न सक्छ कम उमेरमै तपाईको स्मरणशक्ति, बढाउन खानुहोस् यस्ता खाना
मानव जीवनमा स्मरणशक्तिको ठूलो महत्व छ । स्मरणशक्ति तेज भएका मानिसहरुले हरेक क्षेत्रमा चाँडो प्रगति गर्न सक्छन् । कमजोर हुनेहरु पछि पर्छन् ।
त्यसो त मानिसहरुको जन्मजात स्मरण क्षमतामा खासै अन्तराल हुँदैन । करिव-करिव उस्तै हुने हो । तर, बाँच्ने क्रममा कसैले त्यसलाई तिखारेर तेज बनाउँछन् भने कसैले भुत्ते बनाउँदै लैजान्छन् । यो आफैंमा भर पर्ने कुरा हो ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार व्यक्तिको स्मरण शक्तिको गहिरो सम्बन्ध उसको इच्छा, अनिच्छा, चाहना तथा रुचिसँग हुन्छ । तर, स्मरणशक्तिमा ह्रास आएमा मानिसले कुनै पनि क्रियाकलाप राम्रोसँग गर्न सक्दैन । जस्तो कि पढ्न, लेख्न, गणितीय काम गर्न वा कुनै कुरा सिक्न ।
स्मरणशक्ति उमेरमा पनिभर पर्छ । ५० वर्षको उमेर पार गरेपछि विस्तारै स्मरण शक्तिमा ह्रास आउन थाल्छ । तर, कम उमेरमै स्मरण शक्ति कमजोर भएमा त्यसलाई समस्याको रुपमा लिनुपर्छ । यस्तो समस्यालाई मेडिकल भाषामा एम्नेसिया भनिन्छ ।
किन हुन्छ स्मरणशक्ति ह्रास ?
– क्रो’ध, भ’य, चिन्ताले स्मरणशक्तिलाई प्रभावित तुल्याउँछन् । उच्च रक्तचाप, डिप्रेसन, पेनकिलर औषधीको बढी प्रयोगको साइड इफेक्ट स्मरणशक्तिमा पर्न जान्छ ।
-शुरुवाती लक्षण भनेको परिचितको नाम, ठेगाना नसम्झनु वा सम्झन गाह्रो पर्नु हो । यस्ता समस्या भएका व्यक्तिले केही दिनअघिका घ’टना पनि बिर्सने गर्छन् ।
– पढेका, सुनेका कुराहरुलाई झ्याप्प याद गर्न नसक्ने । आफैंले सामान राखेको ठाउँसमेत बिर्सने गरिन्छ ।
-भाषा, संगीत, गायन, नृत्य, अभिनय, कला वा अन्य काम सिक्न गाह्रो हुने । एकपटक भनेको कुरा नबुभ्mने । आलस्यता, अरुचि, चिड्चिडापन, निराशा, छटपटीजस्ता लक्षण पनि देखिन्छन् ।
– यस्तो समस्याबाट बच्नको लागि दैनिकको कार्यतालिका बनाउन सकिन्छ । आफ्नो समयअनुसार बिहान(बेलुकी घुम्ने बानी बसाल्नुपर्छ । कुनै पनि कुरा याद राख्नका लागि रुची लिनुपर्छ ।
– सँधै आफ्नो स्मरण शक्तिको विषयलाई लिएर चिन्तित बनिरहनु हँुदैन ।
– रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिकामा आउने स्मरणशक्ति बढाउने विज्ञापन हेरेर औषधी खोज्न दौडिनु हुँदैन
– सुपाच्य, हल्का, सन्तुलित र पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्छ । खानाको समयतालिका दैनिक एउटै हुनुपर्छ ।
– मौसमअनुसारको हरियो सागपात, सलाद, बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, गान्टेमुला, गाजर, गोलभेंडा, चुकन्दर, पालुंगो लगायतको सेवनले स्मरणशक्ति बलियो बनाउन भूमिका खेल्छ ।
– अन्डा, माछा, दुध, दही, मोही, चीज, मख्खन आदिको पनि नियमित उपभाग गर्दा फाइदा हुन्छ ।
– दैनिक कम्तिमा तीन लिटर शुद्ध पानी पिउनुपर्छ ।
– फलफुलमा आँप, स्याउ, सुन्तला, स्ट्रबेरी, जामुन, भुईकटहर, केरा आदि खानाले मानसिक स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुग्छ ।
के खानु हुँदैन ?
– तारेको, भुटेको, पिरो, मसालेदार खानेकुराबाट सकभर टाढा रहने
– चिया र कफीसितको संगत पनि छोड्ने । धुम्रपान त गर्नै हुँदैन ।
– तमाखु, गुट्खा, गाँजा, भाँङ, मदिरा आदिको सेवनले विभिन्न रोग त निम्त्याउँछ नै स्मरणशक्तिलाई पनि कमजोर बनाउने काम गर्छ ।
स्मरणशक्ति ह्रास हुँदै गएमा मानिसको दैनिकी नै अस्तव्यस्त भएर जान्छ । त्यसैले लक्षण थाहा पाउने बित्तिकै समाधानमा लाग्नु राम्रो हुन्छ ।
होमियोप्याथिक चिकित्सा विधिबाट यसको निकै प्रभावकारी उपचार हुन्छ । बिरामीको मानसिक तथा शारीरिक लक्षणलाई ध्यानमा राखेर होमियोप्याथिक उपचार गरिन्छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि होमियोप्याथिमा थुप्रै औषधी उपलब्ध छन् ।